Shirkadda Miratorg waxay ka bilowday gobolka Tula shirkad ay ku farsameynayso khudaarta iyo baradhada - majaladda "Nidaamka Baradhada"
Sawir laga soo qaaday goobta maalgashiga-tula.com
Xaddiga maalgashiga dhismaha wuxuu dhaafey 8,2 bilyan oo rubi.
Shirkadda Miratorg ayaa ku dhawaaqday inay bilaabayso shirkad soo saarista, keydinta iyo farsamaynta miraha iyo khudradda iyo baradhada degmada Plavsky ee gobolka Tula. Aan xusuusano in heshiis iskaashi oo ku saabsan hirgelinta mashruucan maalgashi ee u dhexeeya dawladda gobolka Tula iyo qabashada beeraha ee Miratorg lagu kala saxeexday Madasha Maal-gashiga All-Russia ee Sochi ee 2019.
Hawlgalinta shirkad cusub oo awood u leh 100 tan oo kaydin ah ayaa si weyn u kordhin doonta bixinta khudradda si gaar ah loo baakadeeyay silsiladaha tafaariiqda, iyo sidoo kale inay si wax ku ool ah u dhammaystirto silsiladda wax soo saarka ee isku dhafan: khudaarta koray waxay daboolaysaa baahida gaarka ah ee haysashada waxyaabaha ku jira isku darka khudradda la qaboojiyey, alaabada dhammeystiran iyo saxamada cuntada, iyo nidaam wax soo saar aan qashin lahayn ayaa kuu ogolaanaya inaad ka baaraandegto ilaa 000% alaabta ceyriinka ah ee lagu daro qaybaha quudinta iyo Bacriminta.
Haysashadu waxay ka fulinaysaa mashruuc xaafadaha Plavsky, Chernsky iyo Shchekinsky ee gobolka Tula. Beerista karootada, basasha, xididdo, toonta iyo baradhada waxaa lagu waraabiyaa dhul beereed ka badan 3 hektar.
Khudaarta waxaa lagu keydiyaa 80 qol oo ku yaal 6 dhisme. Tani waa tan ugu weyn uguna tiknoolajiyadda badan khudaarta Ruushka.
Falanqaynta alaabooyinka waxaa lagu sameeyaa khadadka maydhashada, xirxirida, nadiifinta, nadiifinta iyo qaboojinta aag ka badan 18, 4 kun m2. Wax soo saarka khadadka maydhashada ayaa ka badan 602 kun kg oo alaab ceeriin ah maalintii, khadadka baakadaha khudaarta - 231 kun kg oo alaab ceeriin ah maalintii, khadadka waxsoosaarka - 99,5 kun kg maalintii, khadadka baradhada barafaynta - 3 kg / saac, iyo barafow - 000 kun kg maalintii.
Noocyadan waxaa ka mid ah in ka badan 180 shey: kuwan waa la dhaqay, la jarjaray oo la qalajiyey khudaartii mari jirtay maydhista, sifaynta, kala soocidda otomaatigga ah iyo qiimeynta cabbirka iyo tayada noocyada kala duwan. Farsamooyin badan oo loo isticmaalo wax soo saarka ayaa ah kuwo hal abuur leh oo aan lahayn analogues marka la eego cabirka hirgelinta Ruushka, taas oo keeni doonta nooca khudaarta darayga ah heer tayo ahaan cusub.
Wax soo saarku wuxuu buuxiyaa shuruudaha ugu adag ee xagga nadaafada, faafa iyo badbaadada deegaanka. Shirkaddu waxay maalgelinaysaa in ka badan 330 milyan oo rubi ah dhismaha xarumo daaweyn oo aad u hufan.
Shirkaddu waxay shaqo siin doontaa 907 shaqaale ah.
Tags: "Miratorg"ka shaqaynta khudradda iyo baradhadaGobolka Tula
Dhismaha warshad loogu talo galay baradhada qoto dheer ayaa ka bilaabmi doonta gobolka Tula